Umbuzo woluphi umgangatho omhle we-ACT uxhomekeke kwisikolo osebenza kuso. Kwiziko le-Ivy League, uza kufuna amanqaku angama-30 okanye ngaphezulu ukuze ukhuphisane. Ukuba usebenza kwiyunivesiti yoluntu yesithili, i-18 ingaba yanele. Amakhulu eekholeji afunanga ama-ACT amanqaku kuwo onke, nangona amanqaku anamandla asenokukunceda uzuze i-scholarships ukukunceda ukuhlawula ikholeji.
Yintoni Umyinge weMigangatho yesikolo?
Umvavanyo we-ACT unamalungu amane: uLwimi lwesiNgesi, uLwazi, iMathematika kunye neSayensi. Icandelo ngalinye lifumana amanqaku phakathi kwe-1 (ephantsi) kunye ne-36 (phezulu). Ezi ziphumo ezine zize zenzelwe ukuvelisa amanqaku ahlukeneyo asetyenziswe ziikholeji ezininzi.
Ngo-2017, abafundi abangaphezu kwezigidi ezimbini bathatha uvavanyo. Amanqaku ahlukeneyo ahlukeneyo angama-21, oku kuthetha ukuba malunga neepesenti ezingama-50 zabaphambukeli abavavanya ngaphantsi kwe-21. Amanqaku aphakathi kwamacandelo amane e-SAT asemagqabini afanayo:
Umyinge we-ACT Act izikolo ngo-2017
UMTHETHO ICandelo Isilinganiso semali
Yintoni efunwa njenge-ACT ACT Score?
Ukubaluleka kwemigangatho ye-ACT akufaneleki phantsi. Ngokuqinisekileyo iiKholeji ziqwalasela izinto ezininzi xa zenza isigqibo sokwamkelwa, kodwa amanqaku kuMTHETHO okanye kwi-SAT yilona elula kakhulu ekuthelekiseni abafundi abakwizikolo eziphakamileyo ezahlukeneyo.
Kwakhona, iikholeji zihlala zisebenzisa amanqaku xa zikhetha abaphumeleleyo bezofundiswa kwaye zifanele abantu abancedayo.
Zibeke ezicathulweni zegosa lokungeniswa kwesikhashana. Yiyiphi enokubaluleka ngaphezulu: I-semester ye-App ye-App A kwiFransi okanye umenzi we-B oyingqungquthela kwi-symphony yomhlaba wonke? Kubizo olubi.
Kodwa i-34 kuMthetho ayikho into ephawulekayo ngaphezu kwe-28.
Kwakhona, qaphela ukuba ezininzi izikolo zenza i-ACT idatha yoluntu, kwaye bayazi ukuba ukunyuswa kwabo kuxhomekeke kumanani aphezulu. Ikholejini ayiyi kuthathwa njengento "ekhethekileyo" okanye "elite" ukuba abafundi bayo banomyinge we-ACT umlinganiselo we-19.
Ngoko ke yintoni umgangatho omhle we-ACT? Uvavanyo luqukethe ezine: Ulimi lwesiNgesi, ukufunda, iMathematika kunye neSayensi. Icandelo ngalinye lifumana amanqaku phakathi kwe-1 (ephantsi) kunye ne-36 (phezulu). Ezi ziphumo ezine zize zenzelwe ukuvelisa amanqaku ahlukeneyo asetyenziswe ziikholeji ezininzi.
Abafundi abancinane kakhulu bafumana umgangatho opheleleyo we-ACT, nokuba nabo bafika kwiikholeji eziphezulu zelizwe. Enyanisweni, nabani na obeka amanqaku angama-34, ama-35 okanye ama-36 phakathi kweepesenti ezi-1 zabafundi abavame ukuvavanya kwilizwe. Oku kuthethi, kwiikholeji zee-enyuvesi ezikhethiweyo kakhulu, kufuneka ube nenjongo yokufumana amanqaku angama-30 okanye ngaphezulu.
Amacwecwe angezantsi abonisa udidi lwama-50 ephakamileyo lwe-ACT izikolo ezikolweni ezahlukeneyo. Iipesenti ezingama-50 zabafundi abavunyiwe zawela ngaphakathi kwezi manani. Gcina ukhumbule ukuba ama-25 ekhulwini kwabafundi abaye bavunyelwa phantsi kweenombolo eziphantsi ezibhalwe apha.
UMTHETHO Ufumana izikolo zeeNdawo eziPhambili eziPhezulu
Iiyunivesithi ezizimeleyo zinokukhuphisana kakhulu.
Ingaba ufuna ukungena kwisikolo se-Ivy League okanye esinye sezikolo ezizimeleyo ezizimeleyo , izikolo zakho mazifanele zibe ngama-30 okanye ngaphezulu.
IQumrhu leMigangatho yokuQhathaniswa (phakathi kwama-50%)
Udidi IsiNgesi IMathematika I-GPA-SAT-ACT
ICarnegie Mellon University 31 34 31 35 31 35 ubone igrafu
University of Columbia 32 35 33 35 30 35 ubone igrafu
University of Cornell 31 34 31 35 30 35 ubone igrafu
IDuke University 31 34 32 35 30 35 ubone igrafu
University of Emory 30 33 - - - - ubone igrafu
IYunivesithi yaseHarvard 32 35 33 35 31 35 ubone igrafu
KwiNyuvesi yaseNortheastern 31 34 31 35 29 34 ubone igrafu
University of Stanford 31 35 32 35 30 35 ubone igrafu
Yunivesithi yasePennsylvania 32 35 32 35 30 35 ubone igrafu
KwiYunivesithi yaseMzantsi California 30 33 30 35 28 34 ubone igrafu
Iikholeji zobugcisa boLiberal zikhethekileyo kubafundi abafuna amava amancinane esikolweni ngemilinganiselo ephakamileyo. Ezi zikolo ziqwalaselwa phakathi kwazo ezilungileyo, kwaye uza kubona amabala amanqaku afanelekileyo wokumkelwa afana nalawo aphezulu kwiiyunivesithi eziphezulu.
Kukho ezinye iikholeji zobugcisa zobuninzi bobugcisa obuvame ukuba ne-bar yokungeniswa kwe-bar.
Amherst College 31 34 32 35 29 34 ubone igrafu
ECarleton College 30 33 - - - - ubone igrafu
ICginnell College 30 33 30 35 28 33 ubone igrafu
Ikholeji yaseLafayette 27 31 27 33 27 32 ubone igrafu
I-Oberlin College 29 33 30 35 27 32 ubone igrafu
Ikholeji yasePomona 31 34 31 35 28 34 ubone igrafu
KwiKholeji yaseSwthmore 30 34 31 35 31 35 ubone igrafu
Wellesley College 30 33 31 35 28 33 ubone igrafu
KwiKholeji yaseWhitman 28 32 - - - - ubone igrafu
College College 31 34 32 35 30 35 ubone igrafu
Iiyunivesithi zikawonkewonke zibonelela ngamathuba asemgangathweni emfundo. Ukuba unayo iso lakho kwelinye, qiniseka ukuba uphando ngemilinganiselo ye-ACT yomlinganiselo . Amanqanaba omgangatho weeyunivesithi zikarhulumente eziphezulu zivame ukuba zincinci kunezo zeekholeji ezizimeleyo nakwiiyunivesithi. Qaphela, nangona kunjalo, ukuba ibha ye-admissions kubafaki-zicelo bezizwe bangaphaya kakhulu kunokuba abafaki-zicelo belizwe.
KwiCyunion University 26 31 26 33 25 30 ubone igrafu
Yunivesithi yaseFlorida 27 31 25 32 25 30 ubone igrafu
Georgia Tech 30 34 31 35 30 35 ubone igrafu
IYunivesithi yaseOhio State 27 31 26 33 27 32 ubone igrafu
UC Berkeley 31 34 31 35 29 35 ubone igrafu
UCLA 28 33 28 35 27 34 ubone igrafu
IYunivesithi yase-Illinois e-Urbana Champaign 26 32 25 33 25 32 ubone igrafu
KwiYunivesithi yaseMichigan 29 33 29 34 27 33 ubone igrafu
Hill UNC Chapel 28 33 28 34 27 32 ubone igrafu
Yunivesithi yaseVirginia 29 33 29 35 29 35 ubone igrafu
KwiYunivesithi yaseWisconsin 27 31 26 32 26 31 ubone igrafu
UMTHETHO Ubhala izikolo
Kubafundi abathatha uMTHETHO ngokuBhala, icandelo lokubhala lifumene kwisikali se-12-point. Qaphela ukuba phakathi kukaSeptemba ka-2015 kunye noJuni ka-2016, amanqaku okubhaliweyo abiwe kwinqanaba elingama-36 kunye namanqaku aphakathi angama-17. Amanqaku aphakathi kwinqanaba le-12-point is approximately 7, kunye nabafundi abangena kwilizwe Iikholeji ezininzi ezikhethiweyo ziba neenqaku ezimalunga no-10 ukuya kwe-12.
Xa i-SAT yenza ikhefu lokubhala ngokuzikhethela ngo-2016, izikolo ezininzi ezazifunayo uMthetho ngokuBhala zatshintshile icandelo lokubhaliweyo kwimfuneko ukuya kwinconywa. Amanqaku okubhala angaba yinto ebalulekileyo kwinkqubo yokumkelwa, kodwa njengoko uzama ukugqiba ukuba unobungakanani bokubhala kakuhle , qaphela ukuba amanqaku ahlukeneyo kulo mvavanyo kuya kubaluleke kakhulu.
Kuthiwani ukuba umgangatho wakho we-ACT umgangatho?
Ukuba ukhathazekile ukuba umThetho wakho weempawu azilungele, ungakhathazeki. Umlinganiselo ongaphantsi kwe-ACT umlinganiselo awuthetha ukuba awukwazi ukungena kwisikolo esithile. Kwakhona, iikholeji ezininzi ezilungileyo ziye zaqonda ezinye iingxaki ezivela kwiimviwo eziphezulu kwaye zikhethe ukuhambisa ukuvavanya-okuzikhethelayo .
Njengoko ubona indlela ulinganisa ngayo ukuvuma abafundi beekholeji ezahlukeneyo, gcina ukhumbule ukuba UMTHETHO ungumlinganiselo omnye wesicelo. Ukuba izikolo zakho zincinci ngaphantsi kwenombolo ye-25 ye-percentile, unokwenza oko ukuba unamaqhinga anamandla kwiiklasi ezinzima. Kwizikolo ezinokungeniswa kwamanye amazwe, ungaphinda uphucule amathuba akho kunye nemisebenzi emfutshane yenkcazo , ii- letters ezikhanyayo zinconywa , kunye nesincoko sokufaka isicelo .
Kwakhona, ungalibali ukuba ungathatha zombini umThetho kunye ne-SAT ukunika isikolo ulwazi oluthe xaxa malunga nobuchule bakho bezemfundo. Ukuba umThetho wakho weempawu awuzange ufikeleleke, qaphela indlela izikolo zakho ze-SAT eziqhathaniswa ngayo kwizikolo ozikhethile.
Ekugqibeleni, unokusebenzisa kwakhona isixhobo samahhala esivela eKappex esiza kunceda uqonde amathuba akho okufikelela kwisikolo esithile.
U-2017 - 2018 UMSEBENZI WEMIGABA Ukukhutshwa kwamaxesha
UMgangatho weMigangatho Ukuqhathaniswa kokungeniswa kwiiKholeji zaseMaldins
UMTHETHO Ulinganisa Ukwamkelwa kwiiKholeji zoBugcisa boBucala boKhetho
Iingingqi zaseMeakakshi zaseMadurai, eIndiya
Iifilimu eziPhambili zezoPolitiko zezoPolitiko zaso sonke ixesha
Iiphuzu ezi-15 eziphambili ze-Gulf Oil Spill
UHendrik Frensch Verwoerd
I-Volleyball Ukufudumala: Pepper
Iyiphi igesi efanelekileyo kakhulu?
Cwangcisa Inkcazo yeNkcazo kunye neMisebenzi
Ukwahlula phakathi kwe-Hardwood kunye ne-Softwood Trees